Afghan feminized mhodzi
Yedu Afghan feminized mbanje mbesa strain ndeye 100% Indica - yakachena Indo-Asia marudzi asina kumbobvira ayambuka. Yakakura pamusoro pezviuru zvemakore munzvimbo yakaoma, ine makomo eAfghanistan, India, Nepal neSoutheast Asia. Miti inogadzirwa iyi yakasimba, yakasimba, uye isingarware nezvirwere. Miti yeAfghan mbanje ine tsika ine huswa uye yakafara, mashizha akaguta. Ivo vanogadzira kuwanda kweanonamira zvakanyanya e cannabis buds ayo akakura, asi akaumbana, uye akapfuma muTC makristasi uye resin gland. Mimwe mbanje yekuAfghan inoshanduka kuita yepepuru kana yagadzirira kukohwa. Nekuda kweiyo yakasimba uye iri nyore kurima zvisikwa, ichi chirimwa chakakura kune vekutanga-nguva kana varimi vechidiki. Iye achakupa mubairo nekugadzirisa nekukasira kune yake nharaunda uye kugadzira akapfuma, akatsetseka hutsi uye kuravira kwakafanana nehah. Ine hwema hwakanyanya uye hwema, Afghan cannabis inogadzira yakanyanya muviri narcotic mhedzisiro.